Mpanamboatra varavarankely tsara indrindra ary orinasa | Media
MEDO dia manolotra rafi-baravarankely alimo feno alim-baravarankely, ao anatin'izany ny: windows outsiwng, varavarankely amin'ny varavarankely, varavarankely mitongilana / hopper, varavarankely manaparitaka, mihodina ary mihodina ny varavarankely, varavarankely voafantina, varavarankely misy sary, varavarankely mihantona, varavarankely ambainy sns.
Samy misy ny kinova tanana sy maotera. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879768 '' Inona koa, ny MEDO dia manolotra endrika am-baravarankely tsy manam-paharoa hanavahana anao amin'ny hafa, ohatra, ny varavarankely fanamafisam-peo indroa, varavarankely 3 amin'ny 1, varavarankely mifanila sns.
Fomba fanokafana varavarankely
Fomba misokatra varavarana
• fahamendrehana ambony • Fahombiazana avo lenta • Fahavitan-javatra avo lenta • tahiry ambany • fidirana malalaka tsy misy sakana tsy misy vidiny • vidin'ny fikolokoloana ambany • faharetana mihombo
Fialan-tsasatra, famolavolana lavaka maro, fantsona miafina
Fitaovana mafana tsara miaraka amin'ny mombamomba ny fiatoana mafana, fantsom-panafody mafana maro-lavaka, ary vera matevina matevina. Tahiry ambany tsy misy tsindry fikorianam-bola misy mombamomba be dia be. Ny vokatra isan-karazany dia ahafahan'ny faritra sy ny scenario rehetra mahita ireo vokatra lafo vidy hamaly ny filàna isan-karazany amin'ny fomba sy ny asany. Ireo entana manavao toy ny varavarankely sy ny varavarankely mandroroa sns sns dia mety mihoatra ny andrasanao hamaly ny filanao izay mety tsy hitanao akory, ary hitarika ny fironana amin'ny tsena.
teknolojia lntion, fampisehoana famehezana avo
Tsindrona lakaoly kaody zoro
Fanamafisana ny rivotra avo
Fanamafisana ny rano avo
Andian-dahatsoratra feno dia apetaho amin'ny dingan-tsindrona lakaoly zoro mba hahazoana hery matanjaka. Ny fambolena mullion be dia be ary ny fantsom-pirakofana miafina no nanatsara ny fahamafisan'ny rano. Ankoatr'izay, ny gasket EPDM premium dia nanatsara ny fahateren'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano.
Mpiaro zoro famoronana, flynet vy tsy manjary translucent
Fandraisana tsy misy sakana
Mpiaro zoro famoronana
Ny rindrin'ny casement varavarana ambany tsy misy sakana dia manome alàlana tsy misy sakana. Flynet vy tsy misy fangarony sy flymesh miafina tena manjavozavo dia azo atao hamaly ny filàna samihafa amin'ny fivoahana ny harato sy ny fomba fijery. Mpiaro zoro mpamorona ho an'ny fikolokoloana varavarankely dia tsy vitan'ny famolavolana tsara tarehy ihany fa amin'ny fiarovana fanampiny mba hisorohana ny zoro maranitra.
Ny mombamomba ny loko roa tonta, izay midika hoe mombamomba ny anatiny sy ny endrika ivelany tsy miraika, dia mety mifanandrify amin'ny endrika anatiny sy ny fomba ivelany. Ny teboka mihidy sy mpiambina tsy mahazaka dia manome extrasafety ary manatsara ny fahombiazan'ny fanoherana ny enta-mavesatra mandrara ny fahateren'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano. manome traikefa niainana mahasalama miaraka amin'ny fisehoana kely indrindra, tsipika mahasorena ary fandidiana mangina. Afaka milamin-tsaina ny mpampiasa amin'ny fiarovana ny rivotra na dia amin'ny toetr'andro tena ratsy sy fitaovana tsy azo antoka aza.
Fampiroboroboana MDPC100A Outswing
MDPC100A110 Fikandrana mivoaka
(fantsom-pifandraisana mifono sahaza + fefy miaro azo ekena)
MDPC100A120 Fikandrana mivoaka
Ny famolavolana patanty, ny mortise ary ny teknolojia tenona, dia nanitsaka ny tatatra miafina
Mortise sy tenon teknolojia
Dingana miafina miafina
Fitaovana mafana tsara miaraka amin'ny mombamomba ny fiatoana mafana, fantsom-panafody mafana maro-lavaka, ary vera matevina matevina. Famolavolana firafitra tany am-boalohany, fantsom-panafody efa niorina, fanamafisana ny rano. Ny fanamafisana ny rano sy ny fanoherana ny rivotra dia manatsara ny mullion mifandray amin'ny mortise sy tenon. Famehezana telo sosona multistep sy firafitry ny tatatra miafina ho an'ny fametahana rano tsaratsara kokoa.
Fefy fiarovana azo vohana, volo fitaratra mitambatra 45 °
Fefy fiarovana azo vohana
45 ° vakana fitaratra mitambatra
Ny fehezam-panovana tsy misy tsinina dia manatsara ny fahombiazan'ny famokarana. Ny fefy fiarovana azo vohana dia tsy vitan'ny hoe miantoka ny filaminana ihany fa manamora kokoa ny fandosirana raha misy tranga maika. Ny fehilasy sy ny endriny mifanaraka amin'ny zorony 45 ° dia manome fomba fijery madio sy tsara.
Mpiaro zoro famoronana, teknolojia fampidirana lakaoly, tsanganana zoro vaovao
Teknolojia fampidirana lakaoly
Tsanganana zoro vaovao
Ny gasket EPDM mitambatra premium dia ampiharina hanatsarana ny fihenan'ny rivotra sy ny fahamafisan'ny rano. Mpiaro zoron-trano famoronana ho an'ny fikandrana fikandrana dia tsy manome endrika tsara tarehy fotsiny fa fanampiny koa fiarovana mba hialana amin'ny zoro maranitra. Andian-dahatsoratra feno dia apetaho amin'ny dingan-tsindrona lakaoly zoro mba hahazoana hery matanjaka. Ny famolavolana ny zoro zoro vaovao dia mahatonga azy ireo ho azo antoka sy tsara tarehy.
Ny mombamomba ny loko roa, izany hoe ny mombamomba ny anatiny sy ny endrika ivelany amin'ny loko samihafa, dia mety mifanaraka amin'ny endrika anatiny sy ny fomba fijery ivelany. Ny teboka mihidy sy mahatohitra Pry dia manome fiarovana fanampiny ary manatsara ny fahombiazan'ny fanoherana ny enta-mavesatra ho an'ny fahamafisan'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano. Ny tahony tsy misy fotony dia manome fiainana miaina milamina miaraka amin'ny fisehoana kely indrindra, tsipika famolavolana malefaka ary fandidiana mangina. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo toky amin'ny fiarovana ny varavarankely na dia amin'ny toetr'andro tena ratsy aza miaraka amin'ny fitaovana tsy mahomby. Ny hinge nohamafisina miaraka amina fiaraha-miasa nohamafisina dia mahatonga ny varavarankely ho marin-toerana, mateza ary azo antoka kokoa.
Fikandrana fidirana + flynet mampiditra
Fikandrana mivoaka + fidirana fidirana
Fanamafisam-peo mafana tsara miaraka amin'ny mombamomba ny fiatoana mafana, fantsom-panafodin'ny multi-cavitythermal lehibe, ary vera matevina matevina. Famolavolana firafitra tany am-boalohany, fantsom-panafody efa niorina, fanamafisana ny rano. Ny fanamafisana ny rano sy ny fanoherana ny rivotra dia manatsara ny mullion mifandray amin'ny mortise sy tenon. Famehezana telo sosona multistep sy firafitry ny tatatra miafina ho an'ny fametahana rano tsaratsara kokoa.
Fefy fiarovana azo vohana, 45 ° fitambaran-drano fitambarana fitaratra mitambatra
Ny gasket EPDM mitambatra premium dia ampiharina hanatsarana ny fihenan'ny rivotra sy ny fahamafisan'ny rano. Mpiaro zoron-trano famoronana ho an'ny fikandrana fikandrana dia tsy manome endrika tsara tarehy fotsiny fa fanampiny koa fiarovana mba hialana amin'ny zoro maranitra. Andian-dahatsoratra feno dia apetaho amin'ny dingan'ny lakaoly zorony hidirana mba hahazoana hery matanjaka. Ny famolavolana ny zoro zoro vaovao dia mahatonga azy ireo ho azo antoka sy tsara tarehy.
Ny mombamomba ny loko roa, izany hoe ny mombamomba ny anatiny sy ny mombamomba azy amin'ny loko samy hafa, dia afaka mifanandrify tsara amin'ny endrika anatiny sy ny fomba fijerin'ny trano ivelany. Ny teboka mihidy sy mahatohitra Pry dia manome fiarovana fanampiny ary manatsara ny fahombiazan'ny fanoherana ny enta-mavesatra ho an'ny fahamafisan'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano. Ny tahony tsy misy fotony dia manome fiainana miaina milamina miaraka amin'ny fisehoana kely indrindra, tsipika famolavolana malefaka ary fandidiana mangina. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo toky amin'ny fiarovana ny varavarankely na dia amin'ny toetr'andro tena ratsy aza miaraka amin'ny fitaovana tsy mahomby. Ny hinge nohamafisina miaraka amina fiaraha-miasa nohamafisina dia mahatonga ny varavarankely ho marin-toerana, mateza ary azo antoka kokoa.
MDPC120A fikandrana mitsivalana indroa
Ny fisehoana manaitra no fahatsapana voalohany omeny! Famolavolana firafitra tsy manam-paharoa sy misy patanty, fanokafana indroa indroa, flynet afenina, fitenenana mifanitsy sy fehiloha, fiteny famolavolana minimalista, fanamafisana tombo-kase maro, fantsona miafina, fomba fanokafana misy patanty ...... Ankoatr'ireo dia tazominao ihany.
rafitra sy famolavolana lovovative, habe lehibe, tombo-kase 5
Fitaovana mafana tsara miaraka amin'ny mombamomba ny fiatoana mafana, fantsom-panafody mafana maro-lavaka, ary vera matevina matevina. Ny mullion vaovao sy ny firafitry ny vakana fitaratra mitambatra amin'ny fehikibo sy ny sisiny dia manome fomba fijery kely mifandanja miaraka amin'ny tsipika famolavolana milamina. Tombo-kase 5 misy gasket EPDM be dia be no nanatsara ny fahamafisan'ny rano sy ny fahateren'ny rivotra.
45 ° beaddrainage fitambaran-jiro mitambatra, Rano miafina
Ny fehilasy sy ny endriny mifanaraka amin'ny zorony 45 ° dia manome fomba fijery madio sy tsara. Mullion be dia be miaraka amin'ny tombo-kase tombo-kase ary miafina.
Fanokafana anaty indroa, teknolojia misy kofehy miafina, mpankafy kofehy azo esorina
Fanokafana anaty indroa
Gauze tsy hita maso
Ny fomba fanokafana indroa indroa dia ampirisihina mafy amin'ny risebuilding avo lenta amin'ny fandidiana sy fanadiovana azo antoka. Fisehoana manidina manidina manome endrika tsara tarehy sy jiro natiora tena tsara.
Mpankafy kofehy azo zahana datachable
Ny teboka mihidy sy mahatohitra Pry dia manome fiarovana fanampiny ary manatsara ny fahombiazan'ny fanoherana ny enta-mavesatra ho an'ny fahamafisan'ny rivotra sy ny fahateren'ny rano. Ny tahony tsy misy fotony dia manome fiainana miaina milamina miaraka amin'ny fisehoana kely indrindra, tsipika famolavolana malefaka ary fandidiana mangina.
- Fiantohana 10 taona ho an'ny fitaovana, izay ny fari-pahaizana avo indrindra amin'ny indostria.
- Fitaovana marika Medo, marika Alemana hardware ary marika amerikana no misy.
- Misy karazany maro ny fomba fitanana.
- Ny tahony tsy misy fotony dia manome endrika minimalist.
- Tongasoa ny serivisy fanamboarana.
Rafitra fanidiana fiarovana avo lenta i Bulgaria
- Fitsapana kodiarana strik
AlI ny fitaovantsika dia nandalo fitsapana mafy tamin'ny tsingerina izay avo heny imbetsaka noho ny fenitra indostrialy.
- Rafitra fanidiana tsy mety
Unqiue fanidiana systemprovitry ny fiarovana fanampiny.
- Fitsaboana avo lenta
Miaraka amin'ny fitsaboana avo lenta, na dia ny composties anatiny aza dia mampiseho ny tsara indrindra amin'ny fomba fijery sy fanoherana ny harafesina.
Zoro voaaro amin'ny fiarovana ny ankizy
Famolavolana rafitra vita patanty
Izy io dia mandray insulated hafanana 35.3mm multi-lavaka esory, fitaratra loaka 27A ary vera poaka 12A avo roa heny fanamboarana, izay afaka mifanaraka amin'ny hafanana fanatanterahana insulated ny faritra mangatsiaka mafy eo am-piantohana insulate feo avo fampisehoana 36db.
Ny fampiasana tombo-kase misy dingana maromaro ary famolavolana firafitry ny tatatra miafina azo antoka fampisehoana vokatra tena tsara.
Windows sy varavarankely kely MEDO - Toetra ao an-trano vaovao
Rafitra MEDO manomeza fomba fijery mivelatra amin'ny zana tery sy vera lehibe
Fampisehoana tena tsara azo tamin'ny fitambarana solomaso, mombamomba, ny hardware sy ny gasket dia afaka manome anao tontolo iainana azo antoka sy milamina
Teo aloha: ambony seza
Manaraka: Rafitra famolavolana Bi